बुद्धको मावली देवदह : अपराधीको अखडा !
रिपोर्ट शुक्रबार, चैत १, २०७५
२७ फागुनमा रूपन्देहीको भैरहवामा प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू प्रदेशको सुरक्षा रणनीति बनाउने बैठकमा जुटिरहेका थिए ।
अनिश पुरी, दुर्गा तिवारी, बलु पौडेल र मनोज पुन
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सुरक्षा बैठकका लागि रूपन्देहीमै थिए । त्यही साँझ भैरहवानजिकै देवदहमा एक युवा मारिए । लखेटेर कुटी कुटी मारिएका उनी थिए तरुण दलका कार्यकर्ता अनिश पुरी (२०) ।
बेलुकी ८ बज्न लागेको थियो, उनी देवदहको खैरेनी बस्तीमा बसेका थिए । उनलाई अपरिचित एक व्यक्तिले जरुरी काम छ भनी बोलाएपछि तीनजना साथीसहित अर्को बस्ती घोडाहातर्फ गए । अनिशले लु४२प ९९८२ नम्बरको मोटरसाइकल चलाएका थिए । उनीसँगै साथीहरू सम्राट र समिर श्रेष्ठ पनि थिए ।
त्यहाँ पुग्नासाथै १०/१२ जनाको समूहले अनिशमाथि आक्रमण गर्‍यो । राजमार्गछेउको बरपीपलचोक आसपासका घरमा रहेका दाउरा र चिर्पटले उनीमाथि आक्रमण गरे । अनिश मोटरसाइकल चढेर भाग्न खोजे तर सफल भएनन् । त्यही बेला आक्रमणकारी युवाहरूले पुनः प्रहार गरे ।
स्थानीयले उद्धार गरी उनलाई देवदह मेडिकल कलेज भलुहीमा पुर्‍याए । तर, चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरे । मोटरसाइकलपछि बसेका सम्राट र समीर घाइते भए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिलबहादुर मल्लका अनुसार देवदहमा व्यापार मेला चलिरहेको थियो । मेलामा स्टल राख्ने र सवारी पार्किङ गर्ने विषयमा स्थानीय युवाबीच विवाद भइरहेको थियो । अघिल्लो दिन पनि मेला परिसरमा स्थानीय युवाबीच हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक मल्ल भन्छन्, ‘मेलाबाट शुरु भएको झगडा गाँजा÷मदिराको लतमा लागेका युवाका कारण घटना भएको हुन सक्छ । यस आतंकका पछाडि अरु धेरै कारणहरू पनि रहेछन् ।’
खैरेनी र घोडाहा देवदह क्षेत्रका युवाहरूका प्रतिष्पर्धी बस्ती हुन् । ती दुई स्थानका युवाहरू आ–आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने लहडमा थिए । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार दुई ठाउँका युवाबीच को हाबी हुने भन्ने उग्रप्रतिष्पर्धाका कारण नै यो घटना भएको हो ।
सधैजसो अशान्त रहने देवदहमा ४ पुस २०७३ मा तत्कालीन युवा संघका रूपन्देही अध्यक्ष दुर्गा तिवारी गोली प्रहारबाट मारिएपछि झन आतंक फैलियो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पारेको यो हत्या भएको एक वर्षपछि २१ पुस ०७४ मा तत्कालीन एमालेका अर्का युवा तथा व्यवसायी वसन्त पौडेलको समेत गोली हानी हत्या भयो ।
यो अवधिमा चन्दा असुली, हत्याको धम्की जस्ता आतंकले देवदह दिनदिनै आक्रान्त बन्न पुग्यो । प्रहरीको अनुसन्धानमा यी सबैका मुख्य योजनाकार देवदहकै मनोज पुन थिए ।
विदेशमा बसेर उनले आफ्नो आपराधिक समूहमार्फत आपराधिक गतिविधि गर्थे । उनले विदेशबाट प्रहरी र सञ्चारकर्मीलाई फोन गरेर पौडेल र तिवारीको हत्या लगायत सबै घटनाको जिम्मा लिए ।
९ फागुन २०७४ मा देवदहमै रूपन्देही प्रहरीको इन्काउन्टरमा उनी र उनका एक सहयोगी सोम आले मारिए । सबै घटनाको जिम्मा लिने पुनको अवसानपछि शान्ति हुने आशा राखेका देवदहवासी त्यसयता पनि निरन्तर आतंकका घटनाले त्रासका दिनहरू काटिरहेका छन् ।
किन सधैँ अशान्ति ?
देवदह तीनतिरबाट घना जंगलले घेरिएको छ । यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिले पहिल्यैदेखि असुरक्षित मानिन्थ्यो । यहाँबाट अपराधीहरू सहजै भाग्न सक्ने अन्य नाका छन् । उनीहरू नजिकको जंगल, भैरहवा हुँदै भारत, बुटवल र भरतपुरतर्फ पनि भाग्न सक्छन् । तर, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रहरी छैनन् ।
तत्कालीन एमालेका युवा नेता दुर्गा तिवारीको हत्यापछि भएको आन्दोलनको यौटा माग थियो– देवदहमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना र घटनास्थल ढेकाबारमा अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले देवदहमा खस्केको शान्ति सुरक्षा फर्काउन इलाका प्रहरी कार्यालय खैरेनीलाई क वर्गको स्थायी इप्रका बनाउने लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि स्थानीयका उक्त माग पूरा भएनन् ।
देवदह नगरपालिकामा ५३ हजार ५ सय २३ जनसंख्या छ । तर, एउटा मात्र प्रहरी चौकी छ, जहाँ १५ जना प्रहरी छन् । चौकी राजमार्गको खैरेनीमा भएकोले प्रहरीलाई राजमार्ग क्षेत्रकै घटना हेर्न भ्याइनभ्याई हुन्छ ।
‘देवदहको खैरेनीमा रहेको प्रहरी चौकीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा १५ जना मात्र प्रहरी छन् । उनीहरू राजमार्ग क्षेत्रमै व्यस्त हुन्छन्’, देवदह नगरपालिका प्रमुख हीराबहादुर खत्री भन्छन्, ‘देवदहवासी अझै कति दिन असुरक्षित भइरहनुपर्ने ?’
‘यस्तो संवेदनशील ठाउँमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त पूर्वाधार र प्रहरी नै छैनन् । हरेक हत्यापछि प्रहरी थप्ने प्रतिबद्धता प्रशासनले कहिल्यै पूरा गरेन।’
युवा पुरीको हत्या हुँदा चलिरहेको मेलाका आयोजक देवदह उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘हामीले माग गरेको जस्तो सुरक्षा प्रबन्ध छैन । प्रशासनको बेवास्ताकै कारण निरन्तर यस्ता हत्या भइरहेका छन् ।’
यो क्षेत्रमा अपराध मौलाउनुका कारणहरू नदीजन्य पदार्थ, तीनतिरका वन, काठ तस्करी, लागुऔषध दुव्र्यसनी लगायत हुन् । यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा निकाल्न मिल्ने प्रशस्त खोला र खहरे छन् । तीे स्रोत दुरुपयोगमा युवा वर्गलाई लगाइएको छ । यी काममा स्थानीय दलका नेता तथा अगुवाले नै युवालाई लगाउने गरेका छन् ।
स्थानीय अगुवा तथा यो क्षेत्रमा अपराधलाई नजिकबाट नियालिरहेका सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोगमा स्थानीय दलका कयौं नेता तथा कार्यकर्ताले नै युवालाई लगाउने गरेका छन् । त्यसबाट आएको रकम बाँडफाँट गरी युवाले लागुऔषधको दुव्र्यसनमा लगाउने गरेका छन् ।
यसले युवाबीच रिसइबी बढाउने, शक्ति प्रदर्शन हुने र हत्या हिंसाका घटना बढेका छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘कयौं अगुवाले नै युवालाई दुरुपयोग गरेका छन्, प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग र दुव्र्यसन नरोक्दासम्म देवदहमा यस्ता घटना रोक्न सकिन्न ।’
स्थानीयहरू अपराध मौलाउनुको अर्को कारण दण्डहीनतालाई पनि ठान्छन् । आतंकको मूल स्रोत मनोज मारिएपछि उनका सहयोगी ठानेर प्रहरीले सातजनालाई पक्राउ गरी संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा पनि चलायो । तर, उनीहरू सबै साधारण तारेखमा छुटे । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन एमाले र माओवादीका युवाहरू बढी थिए ।